Goolhaye.com | Archive | Horyalaada
Home » Archives by category » Horyalaada
Adnan Jenuzai oo qandaraas shan sano ah qalinka ugu duugay Manchester United
Posted on October 19, 2013'); ?> by goolhaye and saved under africa, England, Maxaa Cusub
Adnan Jenuzai ayaa heshiis shan sano ah qalinka ugu duugay kooxda Manchester United taas oo soo afjaraysa kooxihii u gacan haatinayay. Qandaraaska ayaa ka dhigi doonaa adnan ciyaartoyga ugu mushaarka badan kuwada da,diisa ah, Asagoo qaadanaya isbuuciiba aduun gaaray 60,000 gini. Laacibkan ayaa cadaadis waayadaanba kooxdda ku saarayay in la…
Tom Cleverly oo dhaawc dhanka muruqa ah soo gaaray lagana yaaba inuu seega ciyaarta bari
Posted on October 11, 2013'); ?> by goolhaye and saved under africa, England, Maxaa Cusub
Qad dhexeha qaranka Ingiriiska Tom Cleverly ayaa maanta dhaawac muruqa ah soo gaaray ayadoo laga yaabo inuu maqnaado kulamada dhowaan dhacaya ee is reeb-eebka koobka aduunka. Tom Cleverly ayaa ku dhaawacmay tababarkii maanta qaranka ingiriiska ay lahaayeen asagoo aan lagu soo dari doonin ciyaartoyda koowaad ee bilaabaysa kulanka bari ay…
Jordi Alba oo maanta tababarka ku dhaawacmay
Posted on October 10, 2013'); ?> by goolhaye and saved under africa, Maxaa Cusub, Spain
Laacibka difaaca bidix uga ciyaara kooxda Barcelona ee jordi Alba ayaa kooxda ka maqnaan doona Lix isbuuc oo kale ka dib markii uu maanta dhaawac dhanka muruqa ah ku soo gaaray tababarkii kooxda Barcelona. Difaaca qaranka Spain ayaa ka soo kabanayey dhaawac afar isbuuc ahaa oo mudadaan uu garoomada uga…
Ozil oo u digay ciyaartoyda Napoli oo ay isla joogi jireen Real Madrid Higuin, Arbeloa iyo Calejon
Posted on October 1, 2013'); ?> by goolhaye and saved under africa, England, Maxaa Cusub
Laacibka kooxda Arsenal Mosut Ozil ayaa dhambaal u ugu sheegay Twitterka in aysan saaxiibtinimo jirin 3-ciyaartoy ay Real Madrid isku kooxda ahaan jireen ee Gonzalo Higuin, Jose Calejon iyo Raul Albiol. Caawa ayaa waxaa jira kulan ka mid ah koobka horyaalada Yurub oo ay Arsenal la leedahay Napoli kana dhacaya…
Liverpool oo qaarajisay Sunderland ayadoo Suarez u xaqiijiyay labo gool
Posted on September 29, 2013'); ?> by goolhaye and saved under africa, England, Maxaa Cusub
Liverpool ayaa qaarajisay sunderland halkaas oo uu Suarez 2 gool u xaqiijiyay kulan horyaalka Ingiriiska ah oo ka dhacay gagida Stadium of Light. Waa markii u horeysay ee Suarez uu Liverpool u ciyaaro asagoo soo dhamaystay ganaaxii 10-kulan uu xiriirka ingiriisku ku soo rogay xili ciyaareedkii dhamaaday. Waxaa sidoo kale…
Cristiano Ronaldo oo qandaraaskii u kordhiyay Real Madrid Qaadan doonana mushaarka ugu badan dunida
Posted on September 15, 2013'); ?> by goolhaye and saved under africa, England, Maxaa Cusub
Cristiano Ronaldo ayaa u kordhiyay Real Madrid heshiiska asagoo qalinka ku duugay qandaraas shan sano ah oo ku kacaya 76-malyan oo gini taas oo ka dhigaysa ciyaaryahanka ugu mushaar qaadashada badan Dunida. Ronaldo ayaa ku saxiixay heshiiska garoonka Bernabeu maanta ayadoo uu goob joog ahaa madaxwaynaha Real Madrid Florentino Perez.…
Brendan Rodgers”Luis Suarez iyo Daniel Sturriddge waa wada shaqayn doonaan,”
Macalinka Liverpool Brendan Rodgers ayaa sheegay Daniel Sturridge iyo Luis Suares inay wada shaqeeyaan ayagoo fiirinaya danta kooxda. Suarez ayaa ka soo laabanaya ganaaxiisa 10-ka kulan 25-ka bishan, Xiligaas ay Liverpool kulan League Cub La leeyihiin kooxda Manchester United. Brendan Rodgers ayaa waxaa laga war sugayaa ciyaartoyga uu safi lahaa…
Zinadine Zidane: “way adag tahay in la fahmo qiimaha Gareth Bale umana qalmo”
Posted on September 9, 2013'); ?> by goolhaye and saved under africa, Maxaa Cusub, Spain
Zenadine Zidane ayaa shaaciyay inay lacagtii u badnayd ee Real ku iibsato Gareth Bale ay adag tahay in la fahmo, Ayadoo uusan jirin ciyaartoy u qalma qiimahaas. Bale ayaa ugu biiray Real aduun gaaraya 85.3- malyan oo gini asagoo qaadan doona mushaar dhan 300,000-gini isbuuciiba. Zidane ayaa caawiye macalin u…
Arsenal oo u gudbisay xiriirka Ingiriiska ciyaartoyda u safanaysa 2013/2014
Posted on September 5, 2013'); ?> by goolhaye and saved under africa, England, Maxaa Cusub
Chu-park iyo Niklas Bendtner ayaa lagu daray ciyaartoyda Arsenal ee liiskooda loo gudbiyay xiriirika Ingiriiska, Waxaa sidoo kale lagu daray laacibiinta dhawaana Arsenal ku soo biiray oo uu hor boodayo Mezut Ozil, Mathieu Flamini iyo Emilliano Viviano. Waa kuwan liiskoo dhan Arteta Amatriain, Mikel Bendtner, Nicklas Cazorla, Santiago Diaby, Vassiriki…
Page 1 of 190123Next ›Last »	Next
- Powered by WordPress - Designed by goolhaye website tracking software